DAAWO: Agaasime kuxigeenka Ciidanka PMPF oo xilkii la wareegay, xilli PSF diidan tahay – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
November 27, 2021 Xuseen 14
Agaasime Ku-xigeenka Cusub ee Ciidamada Badda iyo Bariga Puntland ee PMPF Mudane Maxamuud Silaal Cumar ayaa xilka kala wareegay Agaasime Ku-xigeenkii hore ee Ciidamada PMPF Mudane Axmed Yuusuf Axmed.
Munaasibadda Xilwareejinta ayaa ka qabsoontay Taliska Guud ee Ciidamada PMPF ee magaalada Boosaaso, waxaana ka qeybgalay saraakiil kamid ah Ciidammada PMPF.
Xilwareejinta Agaasime kuxigeenka PMPF ayaa ka kusoo aadaysa xilli magaalada Boosaaso, ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay xil ka qaadis uu dhowaan ku sameeyay Madaxweynaha Puntland, Agaasimihii hore ee Hay’adda PSF Maxamuud Cismaan Diyaano, oo qoyskiisu muddo 20 sanno ah ay maamulayeen,
Reer Diyaano umadda Puntland ha ka xishoodaan.
20 Sano ma Ku filnaan weysay?
Asad iyo ilmo Diyaano ilaah baan Puntland madaxweyne uga dhigin saa maba sii jirteen.
Waa askar aan dhishbiliinna xataa lahayn,oo qaswadenimo iyo qabqablenimo yaqaan.
Mustaqbalkooda siyaasadeed Puntland waa uga dhamaatay.
@Haahir thanks hadal adaa dhameeyay ilma diyaano waa arkijiradoon iyo iimaanlaawayaal xaaraan lagu dhalay. Balse naftii joogsan waydaa marbay ceeb la kulantaa maanta waa meeshii lagusoo afjarilahaa ilma diyaano.
Well done saraakiisha sharafta leh ee dowladnimada wax ka yaqaan waa kuwan, waxayna mudan yihiin amaan. Ini diyaano haloo sheego Puntland inay ka gudubtay waagii ciidanka caaglayaasha Puntland ciidanka u ahaayeen ee la oranjiray ciidankii hebel! . Puntland ciidan qaran oo biometric ah ayaa loo dhisay cidii aan la jaan qaadi karin looma baahna. Dadka reer Puntland waa inay ogaadaan isbedelka sharaf ka leh oo loogu dhisay ciidan qaran oo ku filan difaacooda.
Dawladda Puntland goorma ayeey yeeleyneysaa Akadeeyadda Saraakiisha oo ay ka qalan jebiyaan Saraakiisha Ciidanka Puntland?
Su’aasha kale waxay tahay soo lama gaarin xilliga Puntland laga dhaqan gelinlahaa Puntland National Service oo ardeyda ka qalan jibisa dugsiyada sare ay soo maraan.
Wallaahi anaa su’aashaas is waydiinayay dhawr maalmood kahor, waana arrin aad u’muhiima maadama Puntland furimo badan kufuran yihiin Midda kale oo iyana wanaagsanaan lahayd oo awoodda ciidankana kor u’qaadi lahayd waxaa weeye in soomaalida kunool Puntland qabiilkay doonaanba ha ahaadeee laga qoro ciidan.
@ Bare waa arin muhiim ah in la helo waxaana is leeyahay dowlada hada jidhaa waa wadaa qorshahas, dhibaatada jidha waxay ahayd ciidan caaglayaal ah oo ciidan kii hebel loo yaqaan oo musuq maasuq iyo askar aan jirin mushahar ku qaata. Waxaas ayaa dowladan wakhti badan ku qaadatay inay baabi iso waana ku guulaystayn in la dhiso Ciidan qaran oo shraf leh.
Ina Maarshaal says:
Go’doon weeye daanyeertaas,waana in sbarciga lagu fuliyaa meelna uma bixi karaane.
Gallan Shalay waatii buraha la saaray ayadoo sharciga la dhawraayo ee ayakana ha lagu fusho.
wadankii nasaweenyaal ayaa usoo baxay hadii dagaalo dhaco mafaaida qabtaan dhul diserta ayaa degentay dumarka mesha wax ka gartee diidan dhalintoda lalaayo nimankkii nasaha weena galan deni dagaal iyo neceeb yeeyan dadka u horseed
Ammaano ku raagtay inaad leedahay ayaad ismooddaa. PSF ma shirkad ammaan oo gaar ah (private security company) oo ilma Diano abbahood ka dhaxleen baa? Ma uurkiraaleyaal (mercenaries) dan shisheeye meeshaa u jooga baa? Mise waa waa ciidan hoostaga xukuumadda Puntland?
Aniga weligayba waxaan qabay tuhun iyo welwel ah in ciidamada loo sameeystay waxa loogu yeero ladagaalanka argagixisada — aakhirka loo isticmaali karo in lagu cadaadiyo shacabka Soomaaliyeed iyadoo madax looga dhigayo general la mid ah Siisi oo lasoo diyaarsaday. Tan kale, ciidan jiritaankiisu ku xiran yahay dagaalka Daacish iyo Al-Shabaab marna daacad kama noqonayaan in laga adkaado oo la dabargooyo kooxahaas sababtoo ah shaqo la’aan baa ku dhacaysa.
Madaxweyne Deni waa ninka ugu habboon inuu sutida u qabto reer Diano iyo inta taagersan; haddii madaxweyne kale tallaabadan qaadi lahaa waxaa loo turjuman lahaa qabyaalad iyo in qolo gaar ah la beegsanayo. Waa arrin loo riyaaqo in PSF la hooskeeno xukuumadda Puntland, inta aysan isu beddelin dowlad ku hoos qarsoon dowlad kale.
Ha biqleyso. Puntolamdtes shacabka puntland kadaa beenta aad qoreysa. Xilwareejinta waa ciidanka badda ee puntland not ciidanka psf
Waxaa cadaatay in reer puntland hal meel ugasoo wada horjeesteen qulqulada ka dhalatay xil wareejinta hogaanka psf. Hadii ilma diyaano indhuhu u furan yihiin wey u jeedaan in shicibka puntland ka jiraan oo ka safan yihiin oo shicibku rabo in ilma diyano xilka u wareejiyaan si nabad ah.
Markii aan arkay video’ga ay soo duubeen hogaan’ka psf waxaa ii cadaatay in hogaanku wada yaha alaalax oo wajiyadoodu ka muuqato hangover iyo khamarjinimo. Waxay umada u cadeeyeen in ay yihiin qeyrul-masul marka ay girteen sababta ay ugasoo baxeen furumihii ay ilaalinayeen. Gaari lagu istaajiye kontoroolka boosaaso dartiis ayey furumihii u baneeyeen. Bal axmaqnimadaas daya.
Guul PMPF. waxaad muujiseen sharaf iyo gobonimo